သမ္မတကို တရားစွဲမှု ထူးခြားဖြစ်စဉ်အဖြစ် တရားရုံးက လက်ခံပြီ | ဧရာဝတီ
စနေလင်း| March 5, 2013 | Hits:13,208
| | လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း ခဲ့မှုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည့် သံဃာတပါးကို မံရွာဆေးရုံပေါ်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
လက်ပန်းတောင်းတောင် အကြမ်းဖက် ခံရမှုနှင့် ပက်သက်ပြီး ဒေသခံ ၃ ဦးက တရားလိုပြုပြီး ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် တရားရုံးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတကို တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ မြို့နယ် တရားသူကြီးက ထူးခြားသော အမှုဖြစ်စဉ်ဖြင့် လက်ခံပြီး မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော သပိတ် စခန်းများကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့သည့်အတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကို တရားစွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လက်ပံတောင်းအရေး ကူညီပေးနေသည့် ကိုသောင်းထိုက်က ပြောသည်။
“အခုက တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်တာပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘာပုဒ်မနဲ့မှ တရားစွဲတာမျိုး မလုပ်ရသေးဘူး။ မြို့နယ် တရားသူကြီးကလည်း သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ရှိသူတွေကို တင်ပြပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီအဆင့်မှာမှ တရားရုံးက လက်မခံရင် ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုအဆင့်ထိ တရားစွဲဆိုသွားမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တရားစွဲဆိုမှုကို ဆည်တဲရွာမှ မ၀င်းဝင်းဌေး၊ မရီဝင်းနှင့် မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာမှ ကိုဇော်နိုင်တို့က တရားလိုပြုကာ တရားစွဲဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတကို တရား စွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တရားရုံးမှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ပန်းတောင်း အရေး ကူညီပေးနေသည့် ကိုဟန်ဝင်းအောင်က ပြောသည်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများကို ဖြိုခွင်းသည့်အချိန်တွင် လူစုခွဲရန် ပြုလုပ်ရမည့် အဆင့်ထက် ကျော်လွန်ပြီး မီးသတ်ကားဖြင့် ရေများဖြန်းခြင်း၊ မီးလောင်ဗုံးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ လက်ကိုင်တုတ်များဖြင့် ဒေသခံများကို ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်မှုသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲ အာဃာတဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ ပေါ်လွင် နေကြောင်း တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့သော စာအရ သိရသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပုဒ်မ ၁၄၄ သည်လည်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထုတ်ပြန်သည့်အတွက် ဥပဒေအရ လွဲမှားနေကြောင်း ၎င်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုသို့ သပိတ်စခန်းများကို ဖြိုခွင်းခဲ့သော သူများကိုလည်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၂ အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ အခွင့်အမိန့်မရှိဘဲ တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိဟု အတိအလင်း ဆိုထားသည့်အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကို တရားစွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီလိုတရားစွဲလို့ သမ္မတဖြစ်သူက ထောင်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါက လွှတ်တော်တွင်းက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ဦးတိုက်လျှောက်ပြီး မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် တောင်မှ အရေးယူဖို့ကို ခုံရုံးတွေဖွဲ့၊ သမ္မတကို ရှုံချတာတွေ လုပ်ရမှာ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သမ္မတဖြစ်သူကို တရားစွဲဆိုရန်မှာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှသာ လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေး ကိစ္စများကို မိမိတို့ ဦးမတည်ကြောင်း၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တရားရုံး သို့သွားပြီး အမှုကြားနားမှုကို နားထောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုဟန်ဝင်းအောင်က ဆိုသည်။
“တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေ ရေးရာအရ ဘယ်သူကမှ ဒီအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လို့ မရဘူးဆိုခဲ့တဲ့အခါ ဒီ ဦးတိုက် လျှောက်တာလည်း မှန်တယ်ဆိုခဲ့ရင် တရားရုံးရဲ့ဆင့်ခေါ်ချက်ကို သမ္မတဖြစ်သူကလည်း လိုက်နာရမှာပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဝန်ကြီးပိုင်သရက်ခြံ မီးရှို့မှုဖြင့် ဖမ်းထားသည့် ရွာသားများ ပြန်လွှတ်ရေး တောင်းဆိုလယ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွှတ်ရေး လက်ပံတောင်း ဒေသခံများ တောင်းဆိုမန္တလေးပြည်သူတချို့ သမ္မတကို ကြိုဆိုခွင့် ပိတ်ပင်ခံရထောင်ကြွေးကျန် ကျခံစေခြင်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုဟု ဆိုဂရိတ်ဝေါ ဦးတင်မောင်ကို သမ္မတ ဆုပေးမှု လယ်သမားများ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> R.zar March 5, 2013 - 9:04 pm	၈၈ တုံးကလည်း စိန်လွင် မဟုတ်ဘူး။ သူ့ ဆရာဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
အခုလည်း ဘယ်သူ ဆရာလည်း ဆိုတာလူတိုင်း သိကြပါတယ်။
ပြဿနာ က ပြည်သူလူ ထု ကို ချစ်ခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး လိမ်ညာတတ် တဲ့ ဦးနေဝင်းလို လူတစ်ယောက် တပ်မတော် ထဲမှာ ထပ်မံမွေးဖွားလာ သောကြောင့်ပါ…………………………
တရားစွဲ လို မနိုင်ရင်တောင် နောင် ဒီလို လူမျိုး( ကိုယ့်အပြစ်ကို သူများကို လွှဲချပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်းတဲ့သူ) မျိုးခေါင်းဆောင် မဖြစ်လာအောင် လုပ်မှရမယ်…………………….
Reply	papa soe March 6, 2013 - 6:16 am	very stupid to sueapresident …. who thinks they can sue and prison him??? meaningless……
Reply	Mr Kian March 6, 2013 - 9:51 am	GOOD JOB…
Reply	U Wai Sar Ya March 6, 2013 - 6:32 pm	နံရံကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်နဲ့ သူ့ဘာသာသံဃာဂိုဏ်းသင့်လိမ့်မယ်
Reply	ုkumudra March 7, 2013 - 6:42 am	နာမည်ကြီးချင်တဲ့ ပညာကောင်းကောင်းမတတ်တဲ့သူတွေကို သမ္မတကို တရားစွဲဘို့ မြှောက်ပေးနေတဲ့ ပညာနဲနဲပိုတတ်တဲ့ နာမည်ကြီးချင်တဲ့ အာဏာရူးတွေ နောက်မှာရှိမှာပေါ့ ။ စိတ်ပျက်စရာဘဲ ။
အမျှော်အမြင်အဆင်အခြင်နည်းပြီး ရေရှည်မကြည့်တတ်တဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့် လူနည်းစုတွေနဲ့ မြှောက်ပေးနေသူတွေကြောင့် နေရာတကာ ဘာလုပ်လုပ် ဆန္ဒပြနေကြတော့ တိုးတက်မလာဘဲ ၁၉၆၂ လို ၊ ၁၉၈၈ လို ၊ နောက်ပြန်သွားကြရတော့မှာ မြင်မိပါသေးတယ်။
နိုင်ငံနဲ့ အများအတွက် ကြည့်ကြပါ ။
ဒေါက်တာမောင်မောင်ပြောခဲ့တာ မှတ်မိကြပါလေ ။
တည်ဆောက်နေဆဲကာလမှာ အချိန်တော့ ပေးရမယ်လေ ၊ ချက်ချင်ကြီးတော့ ဘယ်ရကြပါ့မလဲ ။
ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါတီတွေ ပြည်သူတွေ အားလုံး ကြိုးစားနေကြပါတယ် ။
ဆန္ဒတွေ မကြာခဏ ပြခဲ့ကြတာ ကောင်းတာနဲ့ ဆိုးတာ ဘယ်ဟာက ပိုအကျိူးဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ? ။
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှသာ ပြေလည်မှာပါ ။
ဥပဒေဘောင်တွင်းက စည်းကမ်းကျတဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အလေ့အထကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ ။
Reply	min min March 7, 2013 - 3:36 pm	ဆဒ္ဒန်ဟူစိန် ရဲ့ တပည့် ဆဒ္ဒန်သိန်းစိန်